As of 2019-07-23 11:10:01
GILB:701.00 (40)( 1.00) ADBL:418.00 (65)( 2.00) PPCL:138.00 (130)( 2.00) SEF:10.18 (600)( 0.38) SPDL:91.00 (10)( 1.00) PRVU:276.00 (15)( 0.00) ILBS:400.00 (20)( 8.00) LBBL:210.00 (16)( 2.00) NIB:513.00 (960)( -2.00) UPPER:286.00 (90)( 3.00) MNBBLP:187.00 (4209)( 0.00) BOKL:265.00 (450)( 0.00) CBL:164.00 (600)( 0.00) GLBSL:395.00 (10)( 1.00) PFL:142.00 (8)( 0.00) AKPL:173.00 (84)( -2.00) NICA:463.00 (20)( 0.00) DHPL:72.00 (10)( 3.00) SMFBS:517.00 (10)( 24.00)
कम्पनीले २०७४/७५ को मुनाफाबाट शेयरधनीलाई १० प्रतिशत बोनस शेयर र १६ दशमलव ३१५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको छ । हितग्राही खातामा बैंक खाता अद्यावधिक गराएका शेयरधनीको हकमा नगद लाभांश बैंक खातामा जम्मा भएको छ । १० प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरेपछि पूँजी रू. ७३ करोड २६ लाख पुगेको छ । ६१ दिनको कारोबार अवधिमा कम्पनीको शेयरमूल्य अधिकतम रू. २ सय १२ र न्यूनतम रू. २ सय पुगेको छ ।
खरीद चाप : कम्पनीको आइतवार भएको शेयर कारोबारमा अन्तिम समयसम्म विक्रीचापको तुलनामा खरीद चाप बढी छ । सो अवधिसम्म १२ हजार ७ सय कित्ता शेयर खरीद गर्ने र २ सय कित्ता शेयर विक्री गर्ने माग थियो । अन्त्यमा अर्डर भए पनि म्याच हुन नसकेर शेयर कारोबार भएको छैन ।
2019-04-09 - 118 view(s) - abhiyan